Madaxweyne Xasan oo Kismaayo booqday.Sawirro - iftineducation.com
iftineducation.com – Wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo Madaxweynaha Soomaaliya oo maanta gaaray magaalada Kismaayo, halkaasoo uu kaga qeyb galay munaasabad lagu sagootinayay Ciidamada Seirra Leone ee ka midka ah Ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM. Wuxuuna Madaxweynaha isla maanta dib ugu soo laabtay Muqdisho.
Ciidamada Seirra Leone ee ka baxaya Soomaaliya ayaa sababta dalkooda ay dib ugu laabanayaan ay tahay, kadib markii la waayay ciidamadii bedeli lahaa, maadaama uu dalkooda ka dilaacay cudurka Ebola.xasan-kismaayo-2Madaxweyne Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u rajeeyay ciidamadaasi ka tagaya Soomaaliya inay si nabad ah dalkooda ku tagaan, waxaana uu ku ammaanay kaalintii ay ka qaateen howl galka AMISOM intii ay ku sugnaayeen Gobolada Jubooyinka.
Dhinaca kale madaxweynaha dalka mudane Xasan Sheekh ayaa intii uu ku sugnaa magaalada Kismaayo waxa uu kulan la qaatay mas’uuliyiinta maamulka Jubba iyo qeybaha kale duwan ee bulshada Jubooyinka oo uu kala hadlay xoojinta Dowladnimada iyo in ay kaalin ka qaataan horumarinta deegaannada Jubbooyinka.xasan-kismaayo-3Ciidamo ka socday Seirra Leone oo bedel u ahaa ciidamada ku sugnaa Jubooyinka ayaa mid ka mid ah ciidankaas laga helay cudurka Ebola, taasoo keentay in ciidamadaas la baajiyo, waxaana ciidanka ku sugnaa Soomaaliya aanay muddo sanad ka badan ay ahaayeen kuwo aan la bedelin, maadaama laga cabsi qabay hadii la bedelo in cudurka Ebola uu ku soo faafo Soomaaliya.
Waa ciidamadii u horeeyay ee ka tirsan AMISOM oo ka baxa Soomaaliya, tan iyo markii Midowga Afrika uu bilaabay in ciidamo nabad ilaalin u soo diro Soomaaliya sanadkii 2007-dii, waxaana haatan ku sugan Soomaaliya ciidamo ka socda dalalka Uganda, Brundi, Kenya, Jabuuti iyo Itoobiya.
Daawo hani uk oo soo saartay hees muuqlka katariina oo kale leh is qaawisay